Bishes Khabar | हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा नेप्से, कसले कति कमाए ?
हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा नेप्से, कसले कति कमाए ?
- विशेष खबर मङ्गलबार १२, साउन २०७८ ०७:०३
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाको असर वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त संस्थाको शेयरमा परे पनि नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । आजको कारोवारपछि नेप्सेले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ ।
अशोक लेलैण्डको दसैँ तिहार योजना
आइएमई पे बाट क्यु आर स्क्यान गर्दा रू १ हजार जित्न सकिने